Booliska Oo Ka Digay Banaanbaxyadda Lagu Qabto Muqdisho. – Kismaayo24 News Agency
Booliska Oo Ka Digay Banaanbaxyadda Lagu Qabto Muqdisho.
by admin 17th May 2019 038
Taliye ku xigeenka Ciidamadda Booliiska Soomaaliyeed Sarreeye-Guuto Zakiyo Xuseen Axmed oo ka warbixinaysay falalkii Amni daro ee saacadihii ugu danbeeyay ka dhacey muqdisho ayaa shaaca ka qaaday Boolisku gacanta in ay kusoo dhigeen 20 ruux oo looga shakisan yahay Alshabaab.
Zakiyo waxaa ay sidoo kale sheegtay Laamaha amnigu in ay Bakaaraha ku toogteen nin isku day dil damacsanaa, islamarkaana dhinaca kale ay gacanta kusoo dhigeen Nin isna lagu eedeaynayo in uu Qarax ku xiray Gaari nooca yar ah oo ku qarxay Wadada Maka Almukarama gaar ahaan nawaaxiga Ex Shaleemadii Soomaaliya.
Dhinaca kale Taliye ku Xigeenka Booliska Soomaaliyeed ayaa shacabka uga Digtay in ay Guryahdooda ka kireeyaan Shaqsiyaad aysan ahayntooda aqoon, hadii ay taasi dhacdana waxaa ay hoosta ka xariiqday Gurigiii lagu qabto Xubin ka tirsan xoogaga Dowladda kasoo horjeeda ama Walxo lidku ah Amniga in sharciga la horgeyndoono.
Taliye ku xigeenka ayaa Intaas raacisay boolisku in aysan aqbalayn banaanbaxayo ay sharci daro ku tilmamatay oo mararka qaar ay muqdisho ka dhigaan dad muujinaya afkaartooda
Howlgaladan ayaa imaanaya xili saacadihii ugu danbeeyay ay muqdisho ka dhaceen falal amni daro oo kala duwan.
SAWIRO: Qarax Gaari oo ka dhacay Magaalada iyo Ninkii kadanbeeyay oo.
Madaxweyne Xaaf oo ka jawaab Celiyey Hadal kasoo yeeray Madaxweyne Farmaajo.
TOP NEWS: Dhageyso farmaajo oo markii ugu horeysay ka hadlay xildhibaanada diidan golaha wasiiradda iyo sababta ay….
Tifaftiraha K24 27th March 2017
Taliska Ciidanka qeybta gobolka Mudug oo faah faahiyay Dhacdo dhalisay Dhimasho oo xalay ka dhacday Gaalkacyo
Akhriso: Puntland oo War kulul kas oo saartay Weerarka soomaliland ay saakay kusoo qaaday Tukaraq